Ifama sinombuki zindwendwe onguColleen
I-Easy Breeze Acres yindawo elungele usapho yokuya kubathandi bezilwanyana, imizuzu nje engama-20 ngaphandle kweKelowna. Baleka esixekweni ukuze ubone ukuba ubomi basefama bunokukunika ntoni! Yondla iinkukhu kusasa, thatha amahashe mancinci uyobethwa ngumoya, thambisa iihagu esiswini, phatha amahashe ngeminqathe… Rosa imarshmallows ujikeleze iqula lomlilo phantsi kweenkwenkwezi - kukho indawo yokuhlala yangaphandle kunye nezinto ezihonjisiweyo ezinophawu oluninzi. , kuquka ingxangxasi ebukekayo kunye nedama elenziwe ngesitya sesathelaythi esihlaziywe ngesathelayithi!
I-Bunkhouse ibekwe kumgangatho ophantsi wendlu enkulu kwipropati, kunye nesango layo langasese. Kukho amagumbi okulala ama-2 aneebhedi ezintle ezenziwe ngamaplanga, kunye nendawo eninzi yokuziva usekhaya. Igumbi lokuhlala ligcwele i-rustic charm kwikona nganye, ineeragi ezithambileyo, ii-recliners ezikhululekile, i-trunk yakudala, imidlalo yebhodi, iincwadi kunye nesitovu se-pellet esihle.
I-Bunkhouse ixhotyiswe ngokupheleleyo ngezixhobo ezitsha kraca, kubandakanywa isitovu, ifriji, imicrowave, iwasha kunye nesomisi, isitovu sepellet ukuze sihlale sipholile kubusuku obupholileyo, iilinen ezininzi, iitawuli, kunye neengubo ezongezelelweyo. Ukwenzela lula, ikhitshi ikwaneketile, umenzi wekofu, itoaster, izinto zetafile ezinomtsalane kunye nezixhobo zokupheka ukuze ukwazi ukulungiselela zonke izidlo zakho ngokulula njengoko usenza kwikhaya lakho. Igumbi lokuhlambela libonisa ishawari yokuma yaseYurophu kwaye kukho iitawuli kunye neesepha onokuthi uzisebenzise ngexesha lokuhlala kwakho.
Yonwabela ikofu yakho yasekuseni kumgangatho wabucala ophangaleleyo ngombono omangalisayo wefama ngokuchasene nomva weenkuni kunye neentaba.
Imizuzu engama-20 ukusuka eKelowna, uya kurhangqwa ngamaplanga kwaye umgama nje omfutshane ukusuka kuSave kuKutya kunye ne-Esso. Kukho iindlela ezininzi ezikufutshane, kwaye yimizuzu engama-35 yokuqhuba ukuya kwiBig White.
Umbuki zindwendwe ngu- Colleen
Ngexesha lokutshekishwa ukususela ngentsimbi yesi-3:00 emva kwemini, ndiya kufumaneka ukuze ndibulise njengoko uqhuba usiya kuloo ndawo. I-driveway iya kukhokelela ezantsi kwindlu enkulu, kwaye unokupaka ngasegaraji. Ngexesha lokuhlala kwakho, ndibakho emini ukuze ndiphendule nayiphi na imibuzo okanye ndincedise ngayo nayiphi na eminye imiba njengoko ndisenza imisebenzi yam yemihla ngemihla efama. Intuthuzelo yeendwendwe zam ibalulekile kum kwaye ndiyazingca ngokuba ngumamkeli ohloniphekileyo.
Ngexesha lokutshekishwa ukususela ngentsimbi yesi-3:00 emva kwemini, ndiya kufumaneka ukuze ndibulise njengoko uqhuba usiya kuloo ndawo. I-driveway iya kukhokelela ezantsi kwindlu…